AKHRISO:- Sheekadii Mas ayaa cunay boqolkii kun ee doolar ee la ii dhiibay!’ – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Sheekadii Mas ayaa cunay boqolkii kun ee doolar ee la ii dhiibay!’
AKHRISO:- Sheekadii Mas ayaa cunay boqolkii kun ee doolar ee la ii dhiibay!’
Hiiraan Xog, Feb 14, 2018:- Haweeney ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee Nigeria ayaa shaqada laga joojiyay ka dib markii ay baarayaasha u sheegtay in 36 milyan oo lacagta Niara-ha Nigeria ah uu mas ka cunay.
Lacagtaas ayaa waxay u dhigantaa $100,000.
Philomena Chieshe ayaa ka shaqeynaysay xafiiska guddiga imtixaanaadka Nigeria qeybta lacag qabashada.
Masuuliyiin ka tirsan guddiga ayaa beeniyay sheegashada haweeneydaasi oo uu hadda baaritaan ku socdo.
Arrintan ayaa si weyn looga hadalahayaa dhammaan baraha bulshada Nigeria.
Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa barahooda Twitter-ka ku sheegay inayba suuragal ahayn in mas uu lacag intaa dhan cuno.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @NigeriaSnake
— The Nigerian Snake (@NigeriaSnake) 10 Bisha Labaad 2018
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @NigeriaSnake
Rapper Ycee ayaa qoray waa wax aan la aamini karin
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @iam_YCEE
Lol snake chop money for jamb office 😂😂😂 I swear we are not serious
— ZAHEER! (@iam_YCEE) 11 Bisha Labaad 2018
Wasiirka maaliyada Soomaaliya oo sheegay in la bixin doono lacag shaqo loogu abuurayo Dhalinyarada maamul goboledyada dalka
Dowlada Mareykanka oo ka walaacsan dibadbaxayda ka billowday Itoobiya